Akụkọ - Ngwa nke elektrọnik na ngwa anya defog na lens cctv ogologo nso
E nwere ụdị teknụzụ teknụzụ abụọ.
Ohaneze, 770 ~ 390nm anya ìhè enweghị ike ịgafe site foogu, Otú ọ dị, Infrared nwere ike ịgafe site foogu, n'ihi na infrared nwere ogologo wavelength karịa anya ìhè, na a doro anya na ihe diffraction mmetụta. A na-etinye ụkpụrụ a na defog optical, ma dabere na lens na nza pụrụ iche, nke mere na ihe mmetụta nwere ike ịchọpụta nso-infrared (780 ~ 1000nm), ma melite nghọta doro anya site na isi iyi site na ngwa anya.
Mana n'ihi na infrared bụ ọkụ anaghị ahụ anya, ọ karịrị akarị ihe mgbawa ihe onyonyo ahụ, yabụ enwere ike inweta oji na ọcha.
Elektrọnik defog bụ iji ihe eji edozi ihe oyiyi iji bulie onyonyo ahụ. Enwere ọtụtụ ntinye nke kọmputa-defog.
Dịka ọmụmaatụ, a na-eji algọridim na-enweghị ụdị iji bulie ọdịiche dị na oyiyi, si otú a na-eme ka nghọta anya nke onwe dị mma. Tụkwasị na nke ahụ, enwere usoro mweghachi ihe oyiyi nke ihe atụ, nke na-amụ ihe kpatara ụdị ọkụ na mbibi oyiyi, na-eme usoro mmebi ahụ, ma na-eji nhazi ntụgharị iji mesịa weghachi ihe oyiyi ahụ. Mmetụta eletriki-defog dị ịrịba ama, n'ihi na n'ọtụtụ ọnọdụ ihe kpatara ihe nhụjuanya nke ihe oyiyi ahụ metụtara mkpebi nke oghere n'onwe ya na nhazi ihe oyiyi algorithm na mgbakwunye na foogu.
Mmepe nke teknụzụ teknụzụ
Na mbido afọ 2012, modulu igwefoto mbugharị igwefoto SC120 nke Hitachi kwalitere nwere ọrụ defog. N'oge na-adịghị anya, Sony, Dahua, Hivision, wdg na-ebupụtakwa ngwaahịa ndị yiri ya na electronic-defog. Mgbe ọtụtụ afọ nke mmepe, na kọmputa-defog technology ka nwayọọ nwayọọ matured. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị na-emepụta Lens nwere mmekọrịta miri emi na ndị na-emepụta igwefoto, ma bidola ngwa ngwa ngwa-defog dịgasị iche iche.
Ngwọta site Echiche Sheen
Viewsheen amalitela usoro ngwanrọ nke mbugharị igwefoto emebere emepe nke nwere defog dị elu (ngwa anya + elektrọnik). Iji nweta arụmọrụ kacha mma nke defog. A na-eji usoro nyocha + elektrọnik na-ebuli site na isi iyi na nhazi nhazi. Isi iyi anya ga-ekwe ka ọkụ infrared dị ka o kwere mee ịgafe, ya mere a ga-atụle nnukwu oghere oghere, nnukwu ihe mmetụta na nzacha nwere mmetụta ntụgharị uche dị oke oke. Ihe algọridim ahụ kwesiri ịdabere na ihe ndị dị ka anya nke ihe na ike nke foogu, ma họrọ ogo defog, belata mkpọtụ nke nhazi ihe oyiyi.